'१ जना अनिल शाहले त कति नै काम गर्न सक्छ र ? तर पूरै टिम लागेपछि गर्न नसकिने केहि छैन' (अन्तर्वार्ता)
ARCHIVE, COVER STORY, INTERVIEW, POWER NEWS, SPECIAL » '१ जना अनिल शाहले त कति नै काम गर्न सक्छ र ? तर पूरै टिम लागेपछि गर्न नसकिने केहि छैन' (अन्तर्वार्ता)
अनिल केशरी शाह । केहि दिन अघिमात्र नबिल बैंक लिमिटेडमा सीइओ नियुक्त भएका बैंकर । सन् १९९१ बाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका शाह अवको ४ बर्ष नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेर रहनेछन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा १३ बर्ष बिताएका उनी त्यसपछि नबिल फर्किएका थिए । नबिलपछि उनी मेगा गए र मेगामा कार्यकाल सकिएपछि उनी पुन: नबिल फर्किए ।
कलेज पढ्ने केटाकेटीदेखि बैंकिङबारे खास नबुझेकाहरुले पनि चिन्ने पात्र हुन् अनिल शाह । धेरैका प्रेरणाका स्रोतसमेत बनेका छन् उनी । कतिपयले बैंकर भन्छु भन्दा पनि 'अनिल शाहजस्तो बैंकर बन्छु' भनेर सपना बुन्ने गरेका छन् । यसो त मेगा बैंक छोडेर नबिल बैंकको सीइओ हुँदासम्मको यो बीचको समय उनका लागि त्यति सुखद् बनेनन् । केहि विवादको सामना पनि गर्नुपर्यो । यिनै धेरैले चिनेका बैंकर अनिल शाह अवको ४ बर्षपछि भने बैंकिङबाट नै बिदा लिने सुरमा छन् । यहि सन्दर्भमा अर्थ सरोकारकर्मी सुरज प्याकुरेल र रेखा ग्वायमरुले उनीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
१. नबिलको सीइओ हुनुभएकोमा बधाई छ । अव नबिलका सेयरहोल्डरले तपाईंबाट के अपेक्षा गर्ने ?
नबिल बैंक एउटैमात्र बैंक जो जसले मर्ज पनि गरेन, एफपीओ जारी पनि गरेन, कुनै संस्थालाई अक्वाएर पनि गरेन । आफैंले कमाएको पैसाले पूँजी पुर्यायो । बैंक ८ अर्व को बैंक भइसक्यो । सेयर होल्डरलाई नबिल बैंकले कहिले पनि दुखी बनाएको छैन । सेयर होल्डरलाई चाहिने भनेको मुख्य २ चीज हो, एउटा रिटर्न, अर्को बैंकको ख्याती । यो ४ बर्षमा म नबिलमा रहँदा बैंकको ब्राण्ड अझै माथि पुगोस् भन्ने धेरैको चाहाना छ । मेरो पनि छ । यो दुवै कुरामा सेयर होल्डरहरु दु:खी हुनुपर्ने छैन । यो ४ बर्षको अवधिमा हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ । जुन रफ्तारमा हामी हिंडीरहेका थियौं, त्यसरी मात्र हिड्ने हो भने हामीलाई नम्बर १ हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले केहि फरक तरिकाले अगाडी बढ्दैछौं । तत्कालका लागि नबिललाई ब्राण्डमा समस्या छैन । नबिल बैंक नचिनेको निकै कम छन् । त्यसैले अव हामी ब्रान्च नेटवर्क बढाउने, ग्राहकहरुलाई बैंकमा झन् आकर्षित गर्ने तर्फ लागेका छौं । ग्राहकले यो भएन र त्यो भएन होइन, नबिलको राम्रा कुराहरु भन्ने बनाउनु छ । त्यसका लागि हाम्रो टिमलाई 'रि-एनरजाइज' गर्दैछौं । घर बनाउन जग राम्रो बनाउँदैछौं ।
२. नबिल बैंक त सिष्टममा चलेको बैंक हो, यहाँ अनिल शाहको भूमिका खास छैन भन्ने टिप्पणीलाई कसरि लिनुहुन्छ ?
म पहिलो पटक नबिलमा आउँदा पनि धेरैले यहि भन्थे । त्यो बेला नबिल बैंक नम्बर १ भइसकेको थिएन । हामीले काम गरेर नबिललाई त्यतिबेला पनि १ नम्बर बनायौं । तर जसले त्यसो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो, उहाँले गलतचाहिं टिप्पणी गर्नुभएन । किनकि एक जना अनिल शाहले मात्र सबै कुरा गर्न सक्दैन । तर पूरै नबिल टिम लाग्दा गर्न नसक्ने केहि पनि छैन । जुन सीइओले टिमलाई बुझ्छ, त्यो नै सफल हुन्छ । 'म' होइन 'हामी' बनेर अगाडी बढ्यौं भने नबिल बैंकलाई नम्बर १ हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । अनिल शाहले पनि आफ्नो पसीना बगाएको हो । बुद्धी चलाएको हो । तर बैंकमा काम गर्ने सेक्युरिटी गार्ड देखि ड्राइभरसम्मले मिलेर काम गरेको हुनाले बैंक यति माथि आएको हो । अव आउने ४ बर्षमा हामी कुरा कम गर्नेछौं । काम बढी गर्नेछौं । मेरो बैंकमा एउटा सपना छ । यो पहिलो जोइन्ट भेन्चर बैंक पनि भएकाले बाहिर पैसा कमाएर यहाँ डीभीडेन्ड ल्याउन चाहान्छु । त्यसका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौं । त्यो नेपाली बैंकिङका लागि नयाँ अनुभव हुनेछ ।
३. तपाईं अव ४ बर्षपछि बैंकिङ नै छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ, कुरा के हो ? ४ बर्ष पछि अनिल शाहले के गर्छ ?
हो, यो मेरो 'लास्ट इनिङ' हो । यो बीचमा धेरै बैंक परिवर्तन पनि गरिन । १३ बर्ष हालको स्ट्याण्डर्ड चार्टडमा काम गरें । त्यसपछि ६ बर्ष नबिल बैंकमा गरें । ८ बर्ष मेगा बैंकमा गरें । अहिले नबिलमा आएको छु । म भित्र एउटा भिजन थियो, छ । ३५ बर्ष बैंकिङमा काम गरें । त्यो पूरा गरेपछि अव बैंकिङ पुग्यो । त्यसपछि अनिल शाह फेरि घरमा बसेर टिभी हेरेर बस्ने भन्ने पनि होइन । लिडरशिप कोच बनौंला, फोटोग्राफर बनौंला, कन्सलट्यान्ट बनौंला । के गर्ने भन्ने सोचेको छैन । तर बैंकिङचाहिं छोड्छु ।
४. त्यसपछि अनिल शाह राजनीतिमा आउने कुरा सुनिएको छ नि ? अहिलेदेखि त्यसैको तयारी हो कि ?
म राजनीतिमा लाग्ने भएको भए अहिले नै लाग्थें होला । पहिला राजनीतिको बारेमा खुब बहस गरेको पनि हो, कुरा गरेको पनि हो । आगामी दिनमा पनि त्यो गरि नै रहन्छु । तर सक्रिय राजनीतिमा भने लाग्दिन । त्यसरी राजनीति गर्नु नै थियो भने ३० बर्ष अघि गर्नुपर्थ्यो । अव त्यस्तो कुनै प्लान छैन ।
५. यति लामो समय बैंकिङमा लाग्नुभयो, के पाउनुभयो, के गुमाउनुभयो ?
मैले धेरै कुरा पाएँ । आज अनिल शाह बैंकिङकै कारण अनिल शाह बन्न सकेको हो । नाम पनि राम्रो कमाएँ । दाम पनि कमाएँ । तर परिवारको सुख गुमाएँजस्तो लाग्छ । म ९-५ जागिर खाएर यो स्थानमा आएको होइन । दिनरात खटेको छु । यो बीचमा परिवारमा दिनुपर्ने समय दिन सकिन । कतिपय साथीहरुले आफ्ना छोरा छोरीलाई घुमाएको, रमाइलो गरेको देख्दा कता कता मनमा चिसो पस्छ । मेरी छोरी अहिले १२ कक्षाको पढाइ सकेर उच्च शिक्षाको तयारी गरिरहेकी छिन् । यहि बीचमा मैले बैंकिङमा समय दिएँ । छोरीलाई दिनुपर्ने समय दिन सकिन । मैले यसकारण पनि अव लास्ट इनिङ भनेको हो । म अनुप दाइलाई खुब सम्झन्छु । उहाँले निकोन एयर सुरु गर्नुभयो । एनएसीलाई नाफामा लैजानुभयो । तर एक दिन एकासी हृदयघात भएर उहाँको निधन भयो । आफ्नो परिवारलाई उहाँले पनि समय दिन सक्नुभएको थिएन । मेरो हकमा त्यस्तो नहोस् भन्ने कुराले मलाइ झस्काईरहन्छ । जिन्दगीको एउटा पारिवारिक पाटोको मज्जा पनि लिनुछ । म अवको ४ बर्षपछि परिवारलाई खुब समय दिने प्लानमा छु ।
६. बुढेसकाल लाग्ने बेला भइसक्यो, अझै यस्तो फिट हुनुहुन्छ । यसको भित्री राज के हो ?
आफ्नो स्वास्थ्य भनेको आफुले कति महत्व दिने हो भन्ने कुरा आफैंमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिपय युवाहरुले 'दाइ तपाईंको उमेर भएपछि स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँला नि ! अहिले त पैसामै ध्यान दिने हो' भन्नुहुन्छ । तर मलाई त्यो गलत हो जस्तो लाग्छ । म स्वस्थ हुनुमा निरन्तरताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । २५ बर्ष भयो नियमित जिम जान लागेको । जिममै पनि म देख्छु, साथीहरु आउनुहुन्छ, ३ महिना जिम गर्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ । त्यसरी हुँदैन । शरीरलाई निरन्तर व्यायाम चाहिन्छ । अर्को कुरा म रक्सी चुरोट खान्न । अहिले त झन् भेजीटेरिएन भएको छु । हुन त पहिला नखाएको, नपिएको पनि होइन । तर अव पुग्यो । जव आत्मदेखि नै कुनै कुरा गरिन्छ, सफल नभईने कुरै छैन । ज्योतिषले मासु नखानु भनेर छोड्न साच्चै गाह्रो हुन्छ । तर मनदेखि छोड्ने हो भने सबै सहज छ ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको तनाव व्यवस्थापन हो । तपाईंले मैले यो हातमा लगाएको माला देख्नुभएको छ नि । यो लगाउनुको कारण छ । अहिले काठमाडौँमा खुब ट्राफिक समस्या छ । खुब जाम हुन्छ । कतिपयले ड्राइभरलाई गाली गर्नुहुन्छ । जवकी ड्राइभरले गरेर त्यो ट्राफिक समस्या समाधान हुने पनि होइन । कोहि सरकारलाई गाली गर्न थाल्नुहुन्छ । त्यसले आफैंमा तनाव बढाउनेमात्र काम गर्छ । म त ट्राफिक जाम भयो कि यो माला निकालेर जप गर्न थाल्छु । मनमा आनन्द पनि हुन्छ, कुन बेला जाम खुल्छ पनि पत्तो हुन्न । आनन्द हुन्छ । जिन्दगीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नै तनाव व्यवस्थापन हो । यहि कारण नै म स्वस्थ छु जस्तो लाग्छ ।
७. अनिल शाहको तलवको खुब कुरा हुन्छ बजारमा । तर २०१० मा तपाईंले पाउने तलवमा र अहिले तपाईंले पाउने तलवमा खास भिन्नता छैन नि ! यसलाई कसरि लिनुभएको छ ? पूरानै शैलीमा व्यवहार कसरि चलाईरहनुभएको छ ?
मैले दामलाई मात्र काम गरेको भए यहाँ हुने थिइन । मलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टडमै हुँदा पनि विदेश गएर काम गर्ने राम्रो अवसर आएको हो । त्यसो गरेको भए यहाँ भन्दा निकै बढी पैसा कमाउँथें । तर मैले त्यो सोचिन । आज मलाइ धेरैले चिन्नुहुन्छ, मन पराउनुभएको छ, युवाहरुले मन पराउनुभएको छ, यो सबै मेरो कामले हो । मैले यहि देशमा दिमाग चलाएँ । यहीं पसीना बगाएँ । र यहीं धेरैको प्यारो बनेको छु । पैसाको पछि लागेको भए त्यो सम्भव थिएन । पहिला दाम महत्वपूर्ण थियो होला, मेरो तलव धेरै थियो । अहिले मेरो तलव पहिलाको भन्दा धेरै बढेको यसकारण पनि छैन होला कि मलाइ दाम त्यति महत्वपूर्ण लाग्दैन अहिले । हुन त दाम चाहिन्छ । मेरो घर यहींबाट चल्ने हो । मेरो अन्य व्यवसाय पनि छैन । तर पैसा कमाउने त धेरै छन् नि ! नाम कमाउनेहरु कम छन् । म यहि संस्कारबाट हुर्केकाले पनि मलाइ पैसा ठुलो लाग्दैन । रातभर आनन्दले निदाउन यहि कारण सकेको छु जस्तो लाग्छ । काम गरेको प्रतिफल त पाउनु नै पर्यो । तर दामको पछि मात्र दौडने व्यक्ति सफल हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
८. तपाईं मेगा बैंकमा हुँदा केहि बैंकरसँग तपाईंको व्यक्तिगत रुपमा पनि नाम जोडियो । अहिले फेरि सोहि व्यक्तिलाई नबिल बैंक ल्याउँदैहुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ । खास कुरा के हो ?
सुरुमा त जसरी मेरो नाम अरु कोहि बैंकरसँग व्यक्तिगत रुपमा जोडियो, त्यो नै गलत थियो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा अव उहाँ नबिल आउने भन्ने कुरा मलाई त हो जस्तो लाग्दैन । किन कि नबिल बैंकमा अहिलेकै अवस्थामा सक्षम साथीहरु हुनुहुन्छ । अरु बैंकको माथिल्लो तहका मान्छेहरु ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो आवश्यक छैन । कुनै दिन आउनुभयो भनेपनि उहाँकै बलबुंताले आउनुहोला । मैले ल्याउने भन्ने कुरा एकदम गलत हो ।
९. तपाईं नबिल बैंककै सीइओ भएको मान्छे, बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको मान्छे, फेरि यहि बैंकमा डेपुटी सीइओ भएर आउँदा अफ्ट्यारो लागेन ?
लागेन । किनकि नबिल बैंक अहिले निकै ठुलो भइसकेको छ । सानो जहाजमा पाइलट भएको व्यक्ति ठुलो जहाज चलाउँदा को-पाइलट हुँदा पनि ठुलो कुरै होइन नि । डेपुटी सीइओ भएर आएपछि पनि धेरै कुरा सिकियो, सिकाइयो, काम गरियो । अव सीइओ भएको छु, ४ बर्ष काम गर्छु । यसमा मलाइ कुनै पनि दु:ख मनाउ छैन । भन्नेहरुले यो अनिल शाहले गलत गर्यो पनि भन्लान् । तर पद ठुलो कुरा होइन । तपाईंले गर्ने काम ठूलो कुरा हो । कामलाई बढी प्राथामिकता दिनुपर्छ । मैले पनि त्यहि गरेको मात्र हुँ । यसमा अफ्ट्यारो मान्ने कुरा नै केहि छैन ।
१०. तपाईंलाई क्रिटिक्स गर्नेहरु किन यसरी बढीरहेका छन् ? तपाईंले नै पहिला काम गरेको बैंकमा पनि तपाईंको खुब कुरा काटिन्छ भन्ने सुनिएको छ नि ? कुरा के हो ?
कुरा काट्नेहरुले काटीरहन्छन् । गन्तब्यमा हिंडेको मान्छे बाटोमा कुकुर भुक्यो रे भनेर त्यहीं अल्झियो भने त उ कहिले पुग्छ र गन्तब्यमा ? अहिले मात्र होइन, पहिला पनि मेरो कुरा धेरैले काट्थे होलान् । तर म त्यस्तो कुराको प्रवाह गर्दिन । काम गर्छु र रिजल्ट दिन्छु । बस् ।
११. मेगा छोड्दादेखि नबिलमा सीइओ हुँदासम्म त अलि अफ्ट्यारो नै भयो होला समय ! होइन र ? तपाईंको यसमा अनुभव ?
हो, यो समय अलि गाह्रो पक्कै भयो । बीचमा अरु धेरै कुराहरु पनि आए । तर सबैभन्दा ठुलो कुरा तनाव व्यवस्थापन हो । म यो समयमा पनि तनाव व्यवस्थापनमा सफल भएँ । म त्यो बीचको समयमा पनि थुप्रै काम गरिरहेको थिएँ । मेगामा अर्को एक कार्यकाल बस्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि नआएको होइन । टुरिजम मर्ज हुँदै थियो । आफुले खोलेको संस्था केहि समय अझै काम गरौँ भन्ने पक्कै थियो होला । तर मैले त्यो चाहिन । अनुपमा जी हुनुहुन्छ, अव उहाँले मेगालाई राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । अहिले उहाँले बैंक राम्रोसँग चलाईपनि रहनुभएको छ । अहिले त झन् टुरिजम बैंक मर्ज भएपछी महेश जी पनि आउनुभएको छ । रबिनाजी पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बैंक राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । त्यसपछि म नबिल आएँ । नबिलको यात्रा पनि सहज थिएन । तर डेपुटी सीइओ भएर आएर मैले यहाँ धेरै काम गरें । अहिले खुसी छु ।
(माथिका सबै तस्विर सहकर्मी रेखा ग्वायमरुले लिएकी हुन् ।)